‘Raha Tsy Misy Ny Rariny, Tsy Misy Filaminana!’: Diaben’ireo Makedoniana Manohitra Ny Famelankeloky Ny Filoha Ho An’ireo Mpanao Politika Mandalo Fanadihadiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2016 11:13 GMT
Niampanga ireo lehilahy roa eo amin'ny sary ho mpihantsy herisetra ireo mpanao hetsi-panoherana. Nitoraka vato ny polisy teo anoloan'ny foiben'ny antoko eo amin'ny fitondràna VMRO-DPMNE izy ireo, nefa tsy lasibatry ny fisamborana kosa. Sary an'i Vancho Dzambaski (CC BY-SA) avy o amin'ny tahirin-tsary iray mirakitra ny andro fahatelon'ireo hetsi-panoherana..
Nihely nanerana an'i Makedonia ny onja vaovao-nà hetsi-panoherana, ho valin'ilay famelankeloky ny Filoha Makedoniana, Gjorge Ivanov, tamin'ireo Mpiasam-panjakana ao amin'ny governemanta nampangaina ho nanao kolikoly sy nanampatra fahefana tamin'ny fanenjehana.
Nahatonga fahatezerana lehibe teo amin'ireo olom-pirenena ireo fihetsiky ny Filoha, izay nanome tsy fizakankeloka ara-dalàna ho an'i Nikola Gruevski, Praiminisitra teo aloha,, ankoatr'ireo olona hafa sasany. Ilay famelankeloka dia nahakasika mpanao politika 50 sangany ary ireo mpiara-miasa aminy izay nandalo fanadihadiana avy tamin'ny Biraon'ny Mpampanoa lalàna Manokana, noahiahiana ho nanao kolikoly, hosoka tamin'ny fifidianana, fanaparam-pahefana ary fanafenana vono-olona izy ireo. Resaka voarakitra tao anatinà fandraisampeo tsy ara-dalàna nampanaovin'i Gruevski ireo heloka nolazaina rehetra ireo, ary navoakan'ny mpanohitra ara-politika ho ren'ny vahoaka tamin'ny taona lasa. Tafiditra tao anatin'ilay famelankeloka ihany koa i Zoran Zaev, izay filohan'ny mpanohitra.
Nidina an-dalambe tao Skopje renivohitra ireo Makedoniana ny 12 Aprily, andro nanambaràna ilay famelankeloka. Nifamory nanoloana ny biraon'ny Mpampanoa lalàna Manokana ireo mpanao fihetsiketsehana mba haneho fanohanana ny asan'izy ireo, ary avy eo nifindra tany amin'ny ivon'ny renivohitra, tany amin'ilay lazaina ho Biraom-Bahoakan'ny filoha Makedoniana. Notorahan'ny sasany tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny atody io ary avy eo nandeha nanaraka ny arabe, nihiaka ireo faneva mitaky ny rariny sy ny fitsaharan'ny ‘fitondrana mafia.’ Taorian'ny nibahanan'ireo polisy ny làlan'izy ireo hankany amin'ny foiben'ny antoko havanana eo amin'ny fitondrana VMRO-DPMNE, nitsidika ny toeran'ny governemanta izy ireo ary niparitaka.
“Raha tsy misy ny rariny, tsy misy filaminana!” izany no teny fanevan'ireo fihetsiketsehana tany Skopje. Sary an'i Vancho Dzambaski (CC BY-SA) avy tamin'ny tahirintsary mirakitra ny andro voalohany tamin'ireo hetsi-panoherana.
Ny andro faharoan'ilay hetsi-panoherana, olom-pirenena an'arivony maro no nifamory nanoloana ny biraon'ny Mpampanoa lalàna Manokana ary nandeha nankany amin'ny Biraom-bahoakan'ny filoha. Olona maro no naratra, ary am-polony teo no voasambotra taorian'ny namotehan‘ilay andiam-bahoaka ny Biraom-Bahoaka ary nandoroany ny fanaka, niantsoany ny fametraham-pialàn'ny filoha. Nangataka ny fandraisana andraikitra tamin'ireo polisy noho ny fandratràna mpanao gazety roa nandrakotra ilay hetsika ny Sendikà Tsy Miankin'ireo Mpanao gazety sy Mpiasan'ny Media.
Avy eo, nitohy nifindra tany amin'ny Antenimiera ny hetsi-panoherana ary nifandona tamin'ireo polisy teny an-dàlany ho any amin'ny foiben'ny VMRO-DPMNE.
Nialoha ny nanambaran'ny filoha ny famelankeloka avy aminy, nikarakara hetsika hatao ny 14 Aprily ny andianà Fikambanana Tsy miankina Amin'ny Fanjakana 85, nangataka hoe hahemotra aloha ny fifidianana mandra-panaja ny fepetran'ny fifidianana marina sy demokratika. Nahazo mpanjohy maro ilay hetsika natao teo anoloan'ny Antenimiera taorian'ilay vaovao, fa taty aoriana nivadika ho nisy herisetra ilay fifamoriana nilamina , izay natao nanoloana ny foiben'ny antoko eo amin'ny fitondrana, tany amin'ny 0,6 kilometatra niala teo. Nisy vondron-dehilahy nisaron-tava ary nanafina endrika nitoraka vato, tsipoapoaka ary zavatra mirehitra tany amin'ireo polisy niambina ilay toerana, niahiahy ny fihantsiana herisetra tamin'ireo polisy ireo mpanao hetsika. Ny ankamaroan'ireo mpanao hetsika nandeha nanoloana ny tranoben'ny governemanta ary avy eo niparitaka am-pilaminana. Raha atambatra, polisy dimy no naratra ary iray mpanao hetsika no voasambotra.
Tsy zava-baovao ny fisian'ireo mpihantsy misaron-tava amin'ireo hetsika any Makedonia. Ny voalohandohan'ny taona 2015, nandritra ny fangatahana ny rariny tamin'ny fanarontsaronana famonoana olona nataonà polisy, nisy vondrona vehivavy nisoroka ny fitomboan'ny herisetra tamin'ny fanaovana tohivakana olona mba hiarovana ireo polisy tamin'ireo toraka natao hiarovana ireo polisy tamin'ireo toraka nanjo azy ireo nataon'ireo vondrona lehilahy nisaron-tava sy nanafina endrika.
Teo an-kilany, nikarakara hetsika valinkafatra ny antoko VMRO-DPMNE, nampiasa fiara fitateram-bahoaka mba hitaterana ireo mpanjohy azy avy tany amin'ireo tanàna hafa tao Makedonia, toa an'i Bitola, Prilep, Ohrid, na Shtip. Ny mpikarakara ofisialy an'ireo hetsika fanoherana dia ny vondrona iray antsoina hoe GDOM, ny Hetsiky ny Olom-pirenena ho Fiarovana an'i Makedonia, ary ireo mpikambana ao aminy, tafiditra amin'izany ireo tomponandraiki-panjakana notendren'ilay antoko eo amin'ny fitondrana, toy ireo talen'ireo teatiran'ny fanjakana. Nanomboka teo akaikin'ny Antenimiera ireo hetsika tao anatin'ireo roa andro farany, avy eo nifindra nankany amin'ny foiben'ny mpanohitra. Nilaza ireo media mpomba ny fitondrana fa maro kokoa ny isan'ireo nanaraka ireo hetsika valinkafatra ireo. Ao amin'ny media sosialy anefa, misy sary maromaro mandehandeha, ahitàna ny lazaina ho hafatra an-tsoratra nalefan'ireo lehiben'antoko ao an-toerana ho an'ireo mpiasam-panjakana ambany fahefany, hita ho toa manery an-kolaka ireo mpiasa hanatrika ilay fotoana.
Fibodoana, fitokonana tsy mihinan-kanina ary fitsaràna
Tamin'ny famoriana ny mpanao gazety ny 14 Aprily, nilaza ny Mpampanoa lalàna Manokana, Katica Janeva, sy ny ekipany fa na nomena famelankeloka aza ireo ahiahiana, tsy manome fahefana an'ireo ahiahiana hitazona ireo zavatra azony tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny famotsorankeloka, ka raha mahita tranga toy izany izy ireo, tsy maintsy giazana ilay fananana. Nilaza izy fa hanohy ny asany ny biraony ary nanontany tena hoe ahoana no nahafantaran'ny filoha ny anaran'ireo olona malaza anaovana fanadihadiana ka nanomezany famelankeloka azy ireo, kanefa izy ireo tsy nanome azy io loharanombaovao io mihitsy na namoaka io ho fanta-bahoaka.
Nanambara ihany koa izy fa hisy fanadihadiana vaovao hatao amin'ny ben'ny tanànan'ny kaominin'i Bitola ao atsimon'i Makedonia, noho ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny vola mitentina maherin'ny 300.000 euros taminà fifanarahana fitaterana mpianatra.
Nahazo fanamelohan'ireo fikambanana maro isan-karazany ilay famelankeloka. Nanambara ny Kaomity Helsinki ao Makedonia, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana iray manome maimaimpoana fanampiana ara-pitsaràna ho an'ireo olompirenena amin'ny tranganà fanitsakitsahana zon'olombelona, fa nametraka fitoriana an'i Ivanov izy ireo noho ny fanelingelenana ny asan'ny fitsaràna.
Manampahaizana momba ny fidirana ho ao anatin'i Eorôpa, Andreja Stojkovski, namehy ireo antony araka ny lalàna momba ilay raharaha tao amin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny bilaogy, nilaza fa tsy ara-dalàna ilay didim-panjakana famotsorankeloky ny filoha ary tokony atao ho toy ny tsy misy ary tsy azo ampiharina. Anisan'ny mpirotsaka hofidiana hiditra ao amin'ny Fiombeonambe Eorôpeana i Makedonia, ary nanambara ny fanahiany momba ilay famelankeloka ireo tomponandraikitra ao amin'ny Fiombonambe Eorôpeana.
Nanomboka nanao fibodoana ny Anjerimanontolom-panjakana lehibe indrindra ireo mpianatra ao amin'ny Sampana Lalàna ao Skopje mba hanoherana ilay tsy fizakankeloka nomena ho an'ireo mpanao heloka bevava, nitaky ny fametraham-pialàn'ny filoha.
Olona nitontaly 3.000-5.000 no nifamory tao Skopje mba hanohana ny Mpampanoa Lalàna manokana ary manohitra ny fanapahankevitry ny filoha hamela heloka ireo mpanao politika. Sary an'i Vancho Dzambaski (CC BY-SA) avy tamin'ny tahirintsary mirakitra ny andro faharoan'ireo hetsi-panoherana.
Nikarakara hetsi-panoherana lehibe ihany koa ireo olompirenena tao Bitola tao anatin'ireo roa andro farany. Olona an'arivony maro no nanao diabe teny an-dalambe miaraka amin'ny fangatahana mitovy amin'ny an'ireo ankilany tany Skopje, fa indrindra nangataka ny fandraisana andraikitry avy amin'ny ben'ny tanànany.
“Mirehareha ny amin'ny maha-avy any Bitola ahy aho!”
Nisy loharanombaovao niporitsaka nilaza fa nisy voafonja miisa 150 nanomboka nanao fitokonana tsy mihinan-kanina ao amin'ny fonja lehibe indrindra ao amin'ny firenena.
Nanerana ny media sosialy, maro ireo Makedoniana samy nitaky ny fametraham-pialàn'i Ivanov tsy misy hatak'andro ary mampiseho ny fanohanan'izy ireo ny Mpampanoa Lalàna Manokana tamin'ny fampiasàna ny tenifototra #протестирам (Manohitra aho!), #ПоддршкаЗаСЈО (“Fanohanana ny Mpampanoa Lalàna Manokana”) ary #Macedonia. Mitazona bilaogy mivantana ihany koa ny tetikasa fanaovan-gazety mpanadihady Prizma, mampiseho ireo hetsika mandritra ny hetsi-panoherana tsirairay.